Zawgyi Keyboard on iPhone/iPod Touch released — MYSTERY ZILLION
Zawgyi Keyboard on iPhone/iPod Touch released
November 2009 edited November 2009 in MZ News
အောက်ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် သင့် iPhone/ iPod Touch တို့အား အဆင်မပြေပါက itune ကနေ restore ပြန်လုပ်ကောင်းလုပ်ရပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် backup လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ System ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပြင်ထားတာကြောင့် ြဖစ်ပေါ်လာသော တစ်စုံတစ်ခု ပြဿနာများကို လုံးဝ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
OS : 3.0 >=
Type : Jailbreak
Installer : Cydia
Internet : Require
Add Repo in Cydia
Cydia ကို သွားပါ။ Manage အောက်က Source ကို သွားပါ။ Edit ကနေ Add လုပ်လိုက်ပါ။ address တွင်
ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Package များကို သူ reload လုပ်ပါမည်။ အကုန်ပြီးသွားလျှင် Sections အောက်တွင် Zawgyi ဆိုတာ ပေါ်လာမည်။ အထဲတွင်
Zawgyi Font နှင့်
ဆိုပြီး ၂ ခုရှိပါသည်။
ကျွန်တော့် iPhone 3G Version 3.1.2 (7D11) နဲ့စမ်းတာ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီမှာပြောကြားရင်း.. တည်ထွင်ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
မြန်မာလို အကုန်လုံးမြင်ရပါပြီ..အရင်က မေးလ်တွေမှာ မြန်မာစာမမြင်ရတာ..အခုတော့.. ဘယ်မေးလ်လာလာ မြန်မာစာဆို ok ပဲ.. :6::6::6:
ကိုစေတန်ရေ ကျနော် က ခု 3.0.1 ဗျ။တကယ်လို့ 3.1.2 တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကော?အဆင်ပြေပါ့တော့မလား။
ကိုစေတန်ရေ ကျနော် က ခု 3.0.1 ဗျ။တကယ်လို့ 3.1.2 တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကော?အဆင်ပြေပါ့တော့မလား။ကိုစေတန်ရဲ့ခုလိုအောင်မြင်မှုကိုအရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျိူ့:):)
ဖုန်းက 3Gs ဒါမှမဟုတ် iPod Touch 3G မဟုတ်ရင်တော့ jailbreak က ကိစ္စမရှိဘူး။ တင်လိုက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ 3.0 နှင့် အထက်ဆိုရပါတယ်။ 3.1.2 ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။
ကိုစေတန်ရေ....... ကျွန်တော်ဖုန်းက 3Gs.. 3.0.1 ပါ ။ cydia source ကနေ add တဲ့အခါမှာဖုန်းက error တက်ပြီးတော့ cydia crash ဖြစ်သွားပါတယ် ။ section ထဲမှာဘာမှမပေါ်တော့ပါ ။ အဲ့ဒါနဲ.့ 3.1.2 upgrade လုပ် blackrain နဲ. jailbrake လုပ်ပြီးမှ keyboard ကော font ပါအဆင်ပြေသွားပါတယ် ။ cydia မှာတင်နိူင်တဲ့အတွက်အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
nightdefender wrote: »
cydia က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် repo လုပ်လိုက်တာလေ။ သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှ မလိုတာ package အသစ်က 3.1 နဲ့မှ အဆင်ပြေမှာမို့ပါ။ 3.0 package က 3.1.2 မှာ အရမ်းလေးလို့ package အသစ်တင်လိုက်လို့3.0 မှာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတာ ဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော် IT Programmer သမား တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျို့။ iPhone သုံးနေတဲ့ user တစ်ယောက်ပါ။ သူငယ်ချင်းပြောလို့ ဒီ Forum မှာ iPhone ထဲမှာ Zawgyi font and keyboard ထည့်နည်း ရှိတယ် ဆိုလို့ လာဖတ်ရင် register လုပ်လိုက်တာပါ။ လုပ်ကြည့်လိုက် အုံးမယ်။ ကျွန်တော်ကစပ်စုတတ်လို့ပါ။ အဲဒါ Programming ရေးရတာလား ? မိုက်တယ်ဗျာ။ အဲဒါတွေအကုန် Saturngod တစ်ယောက်ထဲ လုပ်ထားတာလား? ကျေးဇူးပဲနော်။
English စာတတ်ပြီး လုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတိုင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာပြီး လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ programming မလိုပါဘူး။ Technical ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီး Logic ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဦးသောင်းစုငြိမ်းနဲ့ ကို Zack တို့က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ကိုစေတန်ရေကျနော်မှာ error တခုဖြစ်နေတယ်။
နွေးနွေးလို့ရိုက်လို့ရဘူးဗျ။မနွေးနွေးကျတော့ရတယ်။နွေးနွေးလို့ရိုက်ရင် ဒီလိုပေါ်တယ်။ "နေ ွးနေ ွး"
ပုံတင်ချင်ပေ့မယ့် screenshot မလုပ်ရသေးလို့:D
yes.. but [space]+နွေးနွေး is OK I don't know why it like that may be font problem. I will ask to zawgyi group soon
contact မှာအရှေ့ဆုံးကိုspace ထားလို့မရဘူး:2:။ခုတော့ (.)ခံလိုက်တာ ok သွားပီ:D:D
ကျွန်တော် sunday လောက် keyboard ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်ဗျ။ ဒါမှ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိုအပ်တာတွေ ပြင် အကြံတွေပေးလို့ရမှာဗျ။ ရေးရတာကတော့တော်တော်လေးကို လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ macforus မှာ ရေးမှာဆိုတော့ ၂ ဘာသာနဲ့ ရေးမှာမို့ ပျင်းတာနဲ့ မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ :P